पुटिनको आलोचना गर्ने २३ बर्षिया मोडलको शव सुटकेसमा भेटियो ! – Karnalikhabar
एजेन्सी : रुसी मोडल ग्रेटा वेडलरको शव सुटकेसबाट फेला परेको छ । २३ वर्षीया ग्रेटा करिब एक वर्षदेखि बेपत्ता भए पनि उनको सामाजिक सञ्जाल एकाउन्ट चलिरहेको थियो । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई मनोरोगी भनेपछि ग्रेटा पहिलो पटक चर्चामा आएकी थिइन् ।
यो घटना किन चर्चामा भने युक्रेनसँग चलिरहेको युद्धको बीचमा रुसी मोडल ग्रेटाको शव भेटिएपछि धेरै प्रश्न उठेका छन् । वास्तवमा रुसी मोडलले एक वर्षअघि राष्ट्रपति पुटिनको खुलेर आलोचना गरेकी थिइन्, त्यसपछि उनी बेपत्ता भएकी थिइन् । तर, अहिले उनको शव फेला परेको छ र हत्याराले पनि आफ्नो अपराध स्वीकार गरेको छ । हत्यारा मोडल ग्रेटाको पूर्व प्रेमी हुन्।
फक्स न्यूजको रिपोर्ट अनुसार मोडल ग्रेटा वेडलरको हत्या उनका पूर्व प्रेमी दिमित्री कोरोभिनले गरेका थिए । कोरोभिनले ग्रेटाको घाँटी थिचे र हत्या गरे र त्यसपछि शवलाई सुटकेसमा भरेर कारको डीग्गीमा राखेका थिए। अब कोरोभिनले आफ्नो अपराध स्वीकार गर्दै ग्रेटा वेडलरलाई रुसको लिपेटस्कमा ३०० माइल टाढा लगेर ग्रेटाको शव सुटकेसमा राखेर कारको डीग्गीमा ग्रेटाको शव छोडेको बताएको छ ।
पैसाको विवादमा दिमित्री कोरोभिनले ग्रेटाको हत्या गरेको बताइएको छ । यो हत्या र ग्रेटाको राजनीतिक बयानबाजीसँग कुनै सम्बन्ध नभएको विश्वास गरिन्छ। कोरोभिनले अन्वेषकहरूलाई बताए कि उनी तीन रात होटलको कोठामा ग्रेटाको शवसँगै सुते।
ग्रेटाको मृत्युपछि, कोरोभिनले उनको सामाजिक सञ्जाल पेज अपडेट गरे ताकि उनको मृत्यु वा बेपत्ता भएकोमा कसैले शंका नगरोस्। हाल ग्रेटाका पूर्व प्रेमी कोरोभिनले हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन् । उनको आदेशमा ग्रेटाको शव पनि बरामद भएको थियो ।
अघिल्लो - भारतीय अभिनेता अक्षय कुमारले नेपालीलाई किन यस्तो संदेश पठाए ?
यतिबेला कहाँ, के गर्दैछिन् नाबालिग गायिका ? - पछिल्लो